Kedu ihe kpatara ọtụtụ ala ọma jijiji na-eme na Ecuador | Netwọk Mgbasa Ozi
Saturdaybọchị Satọdee gara aga Eprel 16, 2016 Ecuador nwere oke ala ọma jijiji kachasị njọ kemgbe 1979. Site na ọnwụ nke narị atọ na iri ise, ala ọmajiji ọhara 350 mere ka mba ahụ daa. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ hapụrụ n’ụlọ na-enweghị ụlọ, na ndị ọzọ agaghị enwe ike ịlaghachi na nke ha ruo mgbe ọnọdụ ahụ doziri. Nke a bụ ihe ngosi ọnọdụ nke ụwa ebe enwere Ala ọma jijiji 40 na 475 gara aga.
Ajụjụ bụ, n'ihi gịnị?
Kemgbe mmalite narị afọ gara aga, na Ecuador enwere ọgba aghara iri na abụọ nke nnukwu ike. Ọnọdụ obodo a bụ otu ihe kpatara oke ala ọma jijiji ji dị oke mkpa na mba Ibero-America. Ma ọ bụ na Ecuador, dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ dịka Chile, Bolivia, Panama, California ma ọ bụ Japan, nọ na ihe a na-akpọ Pacific Ring of Fire. Mpaghara a dị kilomita 40.000 n'ogologo, ọ bụkwa ebe ala ọma jijiji kacha ike na mgbawa ugwu mgbawa na-apụta.
Nke ukwuu nke mere na a maara nke ahụ 80% nke ala ọma jijiji kachasị ike n'ụwa na-eme na mba ndị a, dị ka onye nduzi nke mpaghara seismology nke Geophysical Institute of Peru (IGP) mere ka ọ pụta ìhè, Herando Taveras.
Egwuregwu efere bụ ihe kpatara nsogbu ndị a. Planetwa mbara ala, kemgbe amụrụ ya, anọwo na-agbanwe agbanwe mgbe niile n'ihi mmegharị nke efere ndị a na-ebugharị kọntinent. Banyere Oke Osimiri Pasifik, ọ dabere n'ọtụtụ n'ime ha, bụ ndị na-agbakọta ma na-akpata esemokwu n'etiti ha. N'ụzọ dị otú a, esemokwu na-ewuli elu nke a na-aghaghị ịhapụ.
N'ihe banyere Ecuador, Chile, Peru na Colombia, mmegharị ahụ bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ Nazca Plate ọ na-emikpu n'okpuru South America Plate.
Si ebe a ga-amasị m iziga a mmakọ ike na ike maka Ecuador. Ukwuu, agbamume dị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe kpatara ọtụtụ ala ọma jijiji ji eme na Ekwedọọ